Diesel refunds in farming - isiZulu
SARS Home > Types of Tax > Value Added Tax > Diesel refunds in farming - isiZulu
​UKUBUYISELWA IMALI NGODIZILI KUBALIMI
Ngingasitholaphi Isikhwama Sokubuyiselwa Imali NgoDizili?
Ukulima kumngumsebenzi ofanelekile ukungena ngaphansi kweSikhwama Sokubuyiselwa Imali NgoDizili. Izikhungo zkulima ezinngi zifanelekile ukubhaliswa eSikhwameni Sokubuyiselwa Imali NgoDizili. Umuntu onesikhungo sokulima angakwazi ngalokho ukubhalisa Esikhwameni Sokubuyiselwa Imali NgoDizili, inqobo nje uma isikhungo l;eso sihalislwe iNtelantengo. Isikhwama Sokubuyiselwa Imali NgoDizili okwamanje sisingethwe ngohlelo lweNtelantengo, lokhu, kunesidingo sokuba ukubhaliselwa Intelantengo kube yisidingongqandi andukuba uzibandakanye nalesi sikhwama.
Uma umuntu esebhaliselwe Intelantengo njengomthengisi, usengakwazi-ke ukubhalisa Esikhwameni Sokubuyiselwa Imali Ngodizili ngokugcwalisa alethe ifomu i-VAT 101D.
Uma umuntu engabhalisile njengomthengisi ekubhaliselweni Intelantengo, ukuzibhalisa njengomthengisi weNtelantengo kanye nokweSikhwama Solkubuyiselwa Imali Ngodizili kungezeka kanyekanye ngokugcwalisa ulethe amafomu i-VAT 101 kanye ne-VAT101D, ngokulandelana . Qaphela ukuthi lokhu kubhalisa kusancike ekutheni izidingo ezinye zokubhaliselwa Intelantengo neSikhwama Sokubuyiselwa Imali Ngodizili zifeziwe na.
Ngisifaka kanjani isicelo sokubuyiselwa imali ngodizili?
Ukubuyiselwa Imalai ngapahnsi kweSikhwama Sokubuyiselwa Imali Ngodizili kusetshenzwa ngohlelo lokusingatha Intelantengo. Amagunya ayanikezelwa kulabo bathengi abafanelekile ngaphansi koMthetho Wezemithekelo.
Uma sebebhalisiwe, kungafakwa isicelo sokubuyiselwa imali ngodizili kusetshenziswa imbuyiselo i-VAT201 etholakalayo kwi-eFiling. Isicelo sokubuyiselwa imali ngodizili sizokhishwa kwizibizo zeNtelantengo ezikhokhwe esithubeni sentela esithintekayo, kumbe, ukubuyiselwa imali ngodizili kungakhuphula ukubuyiselwa imali ngeNtelantengo okufanele iye kumthengisi.
Kusemqoka ukuba lonke ushicilelo olufanele lugcinwe lapho kuthengwa udizili kanjalo nokubhalwe kwi-log book kumbe eminye imininingwane eveza isamba okuyisona sikadizili odonswe kwisitoko ukuze usetshenziselwe imisebenzi efenelekile nokungeyona kuleso sithuba sentela.
Noma iyiphi imali ebuyiswayo ngodizili okutholakale ukuthi yabuyiswa ngokungeyikho kuyofanelwe ikhokhwe kwa-SARS, isihamba nezinhlawulo kanye nenzalo efanele.
Last Updated: 24/10/2017 2:03 PM ​